Ciidamada Booliska Borama oo Rasaas ku dhaawacay Masuuliyiin ka tirsan Urur Waddani ah | Somaliland.Org
February 28, 2010	Borama (Somaliland.Org)- Masuuliyiin sare oo ka tirsan hay’adda waddaniga AYODA ee Gobolka Awdal, ayaa dhaawacyo kala duwan soo gaadheen, markii uu gelinkii hore ee shalay tacshiirad huwiyey askari ka mid ah ciidanka ilaalada garoonka diyaaraha ee magaalada Boorama.
Masuuliyiinta hay’adda AYODA, ayaa shalay abbaaro 10:30 lagu rasaaseeyey meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Boorama, waxana falkaas ku dhaawacmay masuuliyiin sare oo ka tirsan ururka oo waqtigaas ka soo laabtay dugsi ku yaal degaanka Shabeelay oo dhinaca galbeed kaga toosan magaalada Boorama oo ay u soo qaybiyeen buuggaag, bacaha roobka iyo qalab kale, kadib markii askarigu uu tacshiirad huwiyey baabuurkii ay wateen oo noociisu yahay Landcruiser.
Sida aanu warka ku helnay waxa xilliga falku dhacay la socday baabuurka shan qof oo kala ah; Guddoomiyaha AYODA Mr. Saleebaan Xasan, madaxa waaxda waxbarashada Idiris Faarax Muuse iyo kaaliyaha xisaabiyaha ururkaas Cilmi Maxmed Cilmi, kuwaasoo ay wehelinayeen laba qof oo ka tirsan dadka degaanka.
Kadib askariga oo halkaas maamulka ula joogsaday qori, kuna amray in baabuurku joogsado, dabadeed la joojiyay, haddana faray inay gaadhiga ka degaan. Hase ahaatee, markii gaadhiga ay ka degeen ayey weydiiyeen sababta uu ku haysto, maadaama aanay goobtu ahayn kontarool, madaarkana u dhowayn, balse askarigaasi ugu jawaabay, ‘aniga amar ayaa la isiiyay oo la igu yidhi toogo gaadhiga waddadaas soo mara.’ Intaa dabadeed waxa la sheegay inay ka codsadeen in uu ugeeyo maamulka isaga ka sarreeya ee amarka siiyay, waannuu diiday ninka askariga ah.
“Ninka askariga ah wuxuu ku hadlayay telefoon intii uu baabuurka hayey, mana garanayno cidda uu la hadlayey.” Sidaa waxa yidhi dad goob-joogayaal ah, waxaanay intaa raaciyeen, “Intaa kadib waxa u yimi askari ka mid ah ciidanka madaaarka, wuxuuna askarigii ku yidhi, sii daa inamada waa hay’ad samofal ah oo waan garanayaa, laakiin wuu ka diiday oo ka dhego adaygay, kadib wuxuu riday laba xabbo oo rasaas ah waqti hawlwadeennada AYODA qaarkood dhulka taagnaayeen, kuwo kalena baabuurka ku dhex jiraan, isla markaana wehelinayeen laba qof oo siday sheegeen ay ka soo qaadeen degaanka Shabeelay oo iyaguna gaadhiga saarnaa, waxana halkaas ku dhaawacmay Cilmi Maxamed Cilmi oo ka tirsan hawlwadeennada AYODA oo laba firidh madaxa ka gaadheen, halka xabbadda kalena cuskatay mishiinka gaadhiga.”
Intaa kadib, askariga rasaasta riday oo ka tirsan ciidanka qaranka, ayaa u cararay dhinaca garoonka isaga oo tetefoon ku hadaaya, dabadeedna waxa u yimi bilayska iyo Mr.Qalinle oo ah taliyaha ciidammada birmadka oo la sheegay inuu askariga siiyey amarka uu wax ku toogtay.
Askariga falkan geystay oo ku lebbisnaa dirayska millateriga oo magaciisa la yidhaa Maxamed Aw Daahir Faarax, waxa uu hadda ku xidhan yahay saldhigga dhexe ee booliska Boorama, waxana socota baadhis la xidhiidha sababta falkaasi u dhacay.
Haseyeeshee, taliyaha ciidanka birmadka, ayaa masuuliyiinta ururka iyo madaxda kale ee bilayska u sheegay in gaadhigu dhexmaray garoonka markii askarigu rasaaseeyey, “Haseyeeshee, waxa caddaatay markii dambe ee boolisku baadhis ku sameeyeen in baabuurku aannu dhawayn garoonka, balse marayey waddada gaadiidku maraan ee caadiga ah,” ayuu yidhi taliyuhu.
Taliyaha oo la weydiiyay haybta ninka falka geystay waxa uu ku sheegay in aanay isaga isku hayb ahayn, isagoo markalena tibaaxay in ninkaasi waalan yahay, sidoo kalena waxa maamulka madaarku sheegeen inuu jiro ganaax lagu soo rogay baabuurta dhexmarta garoonka, taasina sababtay in ganaaxaasi lacageed ay baabuurta ka doonanayaan meelo ka baxsan garoonka.
Ilaayo hadda ma jrto wax tafiisiil ah oo laga soo saaray arrinkaas, baadhitaankiina waxa gacanta ku haya ciidanka booliska, iyadoo askari falkaas fuliyeyna lagu tilmaamay mid aan u lahayn khibrad ciidannimo iyo sharciga askarinimo.
Falka shalay ka dhacay duleedka magaalada Boorama ee dhaawacyada loogu geystay hawlwadeennada ururka AYODA, ayaa noqotay ku cusub oo aan nooceeda oo kale hore u soo marin degaankaas.
Previous PostWho will be a victor (my helper) for my cause, Somaliland is calling!Next PostSomali Achievements Awards 2009	Blog